अभिनेता एभगेनी किन्डिनोभ: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, फोटो सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
प्रकाशित 15.09.2019 28.09.2019
अभिनेता एभगेनी किन्डिनोभ: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
एभगेनी किन्डिनोभ, जसको फोटो अहिले तपाईंको अगाडि छ, सोभियत समयमा धेरै महिलाले उहाँप्रति असम्बन्धित प्रेमको शिकार भए। उनको युवावस्थामा अभिनेता ज्यादै सुन्दर थिए तर उनले आफ्नी श्रीमतीलाई मात्र माया गर्थे। यो एक धेरै दयालु र सहयोगी व्यक्ति हो, उसका सँधै साथीहरू थिए जसलाई उसले कहिल्यै सहयोग गर्न अस्वीकार गर्यो। टेलिभिजन दर्शकहरू येभगेनी आर्सेनिविच फिल्म "रोमान्स अफ प्रेमीहरू" को लागि सबैभन्दा धेरै मन पराइन्छ। किन्डिनोभ धनी थिएनन्, त्यसैले उनी चित्रमा फोटो खिच्नका लागि मोस्कोविच कार किन्न सक्छु भन्ने कुरामा उनी अत्यन्त खुशी थिए, उनको पर्याप्त पैसा नभएकोले उनले अझै पैसा toण लिनु परेको थियो। यो आश्चर्यजनक कुरा होइन, सोभियत अभिनेताहरू विलासितामा नुहाएनन् र बरु सानो जीवनशैलीको नेतृत्व गरे। इभगेनी आर्सेनिविचको जीवनमा सिनेमा थिएटर पछि दोस्रो स्थानमा थियो। अब अभिनेता लगभग हटाइएको छैन, तर थियेटर स्टेज, जवानीमा उनको दोस्रो घर हो।
Kindinov Eugene (जीवनी): बाल्यकाल
इभगेनी आर्सेनिविच एक नेटिभ मस्कोभेट हो। उहाँ 24 मे मे 1945 मा एउटा साधारण परिवारमा जन्मनुभएको थियो जहाँ सबैलाई थाहा थियो कि केही पाउनको लागि, तपाईंले राम्रोसँग काम गर्नु आवश्यक छ। आमा गृहिणी थिइन्, बुबाले एक रिचउचरको रूपमा काम गर्नुभयो। यूजीन र तिनकी बहिनी, आमाबाबुले राम्रो पालनपोषण गरे, बच्चाहरूलाई उनीहरूको आज्ञा पालन भइरहेको छ। केटाले टिकटहरू स collected्कलन गर्‍यो, भूगोलको रुचि थियो र यात्राको बारेमा रेभले भरियो। अभिनय क्यारियरको बारेमा त्यसपछि कुनै प्रश्न थिएन।
यो यस्तै भयो कि किशोरावस्थामा येभगेनी किन्डिनोभले शंकास्पद कम्पनीहरूमा यार्डमा धेरै समय खर्च गर्न शुरू गरे। लगभग प्रत्येक दिन मान्छे झगडा मा लाग्यो, उनको चरित्र असहनीय भयो। उनको लागि यो कठिन समयमा, उनकी बहिनी उद्धार गर्न आए। उनी आफ्नो भाइलाई अग्रगामी घर लगिन् र उनलाई एउटा थिएटर क्लबमा उपस्थित हुन मनाए। केटा सहमत भए, उनको नाटकीय जीवन एक हप्ता भन्दा बढी बाँच्ने छैन भन्ने निर्णय गरी, तर त्यसपछि अचानक उनलाई महसुस भयो कि उनले स्टेजमा खेल्न मन पराउँछन्। कलाको यस सानो मन्दिरमा यूजीनले शिक्षक अलेक्जान्ड्रा जर्जिएभना कुडाशेवाको अगुवाइमा उनको अभिनय प्रतिभा पत्ता लगाई र महसुस गरे कि यो उनको भविष्य हो।
इभगेनी किन्डिनोभ नाटकीय कलामा चासो देखाए पछि उनले लगनशील भई अध्ययन गर्न थाले किनभने उनको जीवनको उद्देश्य थियो। स्नातक पछि, केटाले थिएटर स्कूल मा आफ्नो अध्ययन जारी राख्न को योजना बनाई। अन्तमा, अन्तिम घण्टी बज्यो, र यूजीन विद्यार्थी भयो। उनले स्टुडियो स्कूलमा अध्ययन गरे। भि.आ. नेमिरोभिच-डान्चेन्को मस्को आर्ट थिएटरमा। नवशिक्या अभिनेताको शिक्षक एक अद्भुत व्यक्ति भिक्टर कार्लोविच मोन्युकोभ थिए। किन्डिनोभ अझै पनि न्यानोपन र कृतज्ञताका साथ आफ्ना पाठहरू सम्झन्छन्।
थिएटरमा काम गर्नुहोस्
इभगेनिया किन्डिनोभ - त्यस समयका युवा र अनुभवहीन अभिनेता, उनी मस्को आर्ट थिएटर ट्राउपमा स्वीकार्य हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्न सक्दैनन्। तर जब उनले एक्सएनयूएमएक्सको स्टुडियो स्कूलमा आफ्नो अध्ययन समाप्त गरे, उनलाई यो विशेष थिएटरको मंचमा आमन्त्रित गरियो। नयाँ टीममा, यूजीन सबै अभिनेताहरू भन्दा कान्छी थिए, किनकि थिएटर व्यवस्थापनले अनुभवी र परिपक्व व्यक्तिहरूलाई काम दिन रुचायो। किन्डिनोभको लागि एउटा अपवाद बनाइयो, उनी मूल घर जत्तिकै यस थिएटरसँग प्रेम गर्थे र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँप्रति वफादार रहे।
मञ्चमा पहिलो गम्भीर काम भनेको "तलको तल्लो" नाटकको मञ्चको मंचन थियो। यूजीनले वास्का एशेजको भूमिका खेल्‍यो। उत्साहित अभिनेता यति नर्भस थिए कि उनले आफ्नो पार्टनर ग्रिभोभलाई यथार्थ हिरासतमा झुण्ड्याएर मार्दा, एशेजले लुकालाई गलाले घाइरहेको दृश्य खेल्दै। हुनसक्छ यो अप्ठ्यारो पछाडि किन्डिनोभ र ग्रीबोभबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त भयो। केही वर्ष पछि, अभिनेताहरूले साझा भाषा फेला पारे।
यस्तो परीक्षण पछि, यूजीनले नाटक "क्रेमलिन चिम्स" मा नाटकको भूमिका प्राप्त गर्‍यो, अन्य भूमिकाहरू पछ्याइन्। पूर्ण ऊर्जाको साथ, युवा अभिनेता कुनै पनि काममा रमाए, उसले भूमिका खेल्न इन्कार गरेन पनि भूमिका पूर्ण रूपमा नगण्य थियो। जुन किन्डिनोव सहन गर्न सक्दैनन् त्यो निष्क्रियता थियो।
सिनेमाको लागि पहिलो चरणहरू
अहिलेको लागि, यूजीन किन्डिनोवलाई केवल एक थिएटर अभिनेता मानिन्थ्यो, उनको सहभागितासहित चलचित्रहरू एक युवा मानिसका योजनाहरूमा मात्र थिए जसले सबै समय बढी प्रयास गरे। यूजीनको सिनेमामा डेब्यूलाई यस वर्षको "डेड सीजन" 1968 फिल्मको अतिरिक्तमा भाग लिन सकिन्छ। केही वर्ष पछि नै उनलाई फिल्म "द पनीशर" मा ग्रीक सैनिक वेन्जलिसको मुख्य भूमिकाको लागि अनुमोदन गरियो।
तर फिल्म अभिनेता को गौरव यूजीनलाई पोडियममा उचाल्न कुनै हतारमा थिएन। सेटमा आफ्नो डेब्यु कामको दुई बर्ष पछि, उनले "अर्बन रोमान्स" फिल्ममा एक युवा डाक्टरको भूमिका खेले, त्यसपछि "युवा", "आफ्नै इच्छा", "स्प्रिंग टेल", इत्यादि फिल्महरूमा भूमिका खेले। त्यसैले बिस्तारै, एभगेनी किन्डिनोव एक खोजी फिल्मको अभिनेता भए। ।
धैर्यता र इभगेनी आर्सेनिविचको कार्यहरूलाई पुरस्कृत गरियो। ए - कोन्चलोभस्की "प्रेमिकाको रोमान्स" द्वारा फिल्मको रिलीज पछि उनलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षित ख्याति आयो। अभिनेता सर्गेई निकिटिनको यस चित्रमा खेले, जसले सैन्य अभ्यासको क्रममा सुनसान टापुमा पर्दछन्।
फिल्मको कथानकले धेरै आलोचनाहरूको अनुभव गरेको छ, विशेष गरी स्पष्ट प्रेम दृश्यहरूको कारण, तर अन्तमा यो अद्भुत कथा धेरै लोकप्रिय हुन्छ। एक्सएनयूएमएक्समा, फिल्म "रोमान्स अफ प्रेमीहरू" बक्स अफिसमा दशौं स्थानमा पुगे र लगभग 1974 लाख दर्शकहरू भेला भए। यसमा कुनै आश्चर्यको कुरा छैन कि फिल्मको यस्तो सफलता पछि, किन्डिनोभ लोकप्रिय भयो, उनका प्रशंसकहरूको भीड थियो जसले उनीहरूको मूर्तिमा पत्र पठाए।
सत्तरीको दशकमा, इग्गेनी किन्डिनोभ, जसको व्यक्तिगत जीवन र क्यारियर त्यस बेलामा पूर्ण रूपमा लागिसकेका थिए, उनी खुशी थिए र खुशी थिए कि उनले आफ्नो सपना साकार गरे। उनको लागि यो उत्तम समयमा, उनी सबैभन्दा लोकप्रिय युवा अभिनेताको सूचीमा थिए। एक सुन्दर, अग्लो, स्वभाववादी पुरुषले देशको सम्पूर्ण महिला श्रोतालाई पर्दाबाट जित्यो। 70-80 को पालोमा, उनको सहभागितासहितका फिल्महरू: "गोल्डेन माइन", "रेसिडेन्टको फिर्ता", "अर्जेन्ट कल", "नागरिक निकानोरोभा", "प्रतिभा" र अन्य तपाइँ भाडाको लागि पर्खिरहेका छन्।
अस्सीको मध्यतादेखि, किन्डिनोभा कम र कम फिल्महरूमा अभिनय गर्न आमन्त्रित गरियो। यो कुन कारणका लागि थाहा छैन, तर निर्देशक र अभिनेतामा दर्शकहरूको चासो धेरै नै कमजोर भएको छ। यूजीन यसका बारे धेरै चिन्तित थिए, यो अभिनेताको ख्याति गिरावटमा गएको भन्ने तथ्यहरूसँग आउन कठिन थियो। पूर्ण रूपमा निराश नहुनको लागि, किन्डिनोभले फेरि आफ्नो पुरानो थियेटरमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति दिन थाले, जसमा उनले आफ्नो मुक्ति पाए।
अब अभिनेता चेखोभ मस्को आर्ट थिएटरको मंचमा खेल्न जारी छ, र उनकी पत्नी गलिना किन्डिनोभा उहाँसँग खेल्छन्। कहिलेकाँही उनीलाई फिल्महरूमा देखा पर्न आमन्त्रित गरिन्छ, तर सबै प्रस्तावलाई होसियारीसाथ विचार गर्दै उनी सधै राजी हुँदैनन्। त्यो समय जब यूजीन उत्साहपूर्वक कुनै पनि काममा लिएको धेरै बितिसकेको छ। अर्को अभिनेता डब फिल्महरूमा काम गर्दैछन, उसले यो राम्रोसँग गर्नेछ। धेरै स्क्रीन नायकहरु उनको आवाजमा बोल्छन्।
आफ्नो जीवनको दौरान, प्रतिभाशाली अभिनेता इभगेनी आर्सेनिविच किन्डिनोभलाई बारम्बार सम्मानित गरियो र निम्न शीर्षक र पुरस्कारहरू प्राप्त गरियो:
R RSFSR को सम्मानित कलाकार - 1978 वर्ष।
• RSFSR को पीपुल्स कलाकार - 1989 वर्ष।
The फादरल्याण्डमा मेरिटको अर्डर, चौथो डिग्री - 2005 वर्ष।
Or सम्मान को आदेश - 1998 वर्ष।
इभगेनी किन्डिनोभ: व्यक्तिगत जीवन, बच्चाहरू
सुन्दर उपस्थिति, प्रसिद्धि र प्रशंसकहरूको भीडको बावजुद, किन्डिनोभ अनुकरणीय परिवारको मानिस भए। मस्को आर्ट थिएटर स्कूलमा पढ्दै गर्दा युजीनले गलिना नामकी केटीलाई भेटे। यो पहिलो दृष्टिमा प्रेम थियो, आक्रोशपूर्ण विवाहपूर्व भेट पछि, सौन्दर्यको हृदय थरथर काँपे, र उसले केटिको प्रेमको प्रतिवाद गरे। युवा मानिसहरूले विवाह गरे र अझै पनि एक मजबूत अभिनय परिवार संगै बस्छन्। गलिना किन्डिनोभाले आफ्नो पतिसँग टेलिभिजन श्रृंखला "प्रतिभा" मा अभिनय गरी। पति वा पत्नीले आफ्नो मूल थियेटरको स्टेजमा छेड्छन्। भर्खरै, एभगेनी किन्डिनोभले सुझाव दिए कि गलिनाले चर्चमा बिवाह गरून्, उनकी श्रीमती खुशीसित सहमत भए। विवाह भएको छ, अब पति / पत्नी सधैंभरि एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। यहाँ उनीहरूको प्रेम छ!
एक्सएनयूएमएक्समा, किन्डिनोभ परिवारमा एक रमाइलो घटना घटे, गलिनाले एक छोरीलाई जन्म दिइन्। ती केटीलाई डारिया भनिन्थ्यो। उनका आमा बुबा कलाकार हुन् भन्ने तथ्यको बाबजुद डारिया राजवंशलाई निरन्तरता दिन चाहिनन्, उनी आफ्नै बाटो लागे र अन्तर्राष्ट्रिय कानून संकायको मस्को स्टेट इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरनेशनल रिलेशन्समा प्रवेश गरे। एभगेनी किन्डिनोभ आफ्नी छोरीको निर्णयबाट कुनै पनि हिचकिचाएनन्, उनी चतुर र सुन्दर छिन्, र खुशी पति र बुबाले अरू के चाहान्छन्?
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,346 प्रश्नहरू।